မြန်မာပြည်သိန်းတန်ကို မိဘလို လေးစားတဲ့ အဆိုတော် သားငယ် | Popular
မြန်မာပြည်သိန်းတန်ကို မိဘလို လေးစားတဲ့ အဆိုတော် သားငယ်
June 18, 2018 Leanne Win
အမှတ်တရဆိုရင် ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာ ကျွန်တော့်အတွက် အမှတ်တရရှိတယ်။ နေ့တိုင်းအတူတူသွား၊ အတူတူစားပေါ့နော်။ မိသားစုလိုဖြစ်သွားတာကိုး။အမှတ်တရတွေ တော်တော်များတယ်။မနက်မျက်လုံးပွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ ဖြစ်ပျက်သမျှအရာတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော်အကုန်လုံး မှတ်မိတယ်ဗျာ…
Myanmar Idol Season-2 ရဲ့ Winner ဖြစ်ခဲ့သူ သားငယ် တစ်ယောက်က အခုဆိုရင်ဂီတလောကမှာ ‘လမ်းက လေး’ဆိုတဲ့ တစ်ကိုယ်တော် အခွေနဲ့ ဂီတမှတ်တိုင်စိုက်ထူ နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ သားငယ်တို့လို မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ နောက် ထပ်မျိုးဆက်တွေတောင် အခုဆို ပြိုင်ပွဲ တွေ စတင်နေပါပြီ။ မြန်မာအိုင်ဒေါလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ စကားလုံးအထူးအဆန်းတွေပြောဆို တတ်တဲ့ ဒိုင်လူကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ မြန်မာပြည်သိန်းတန်ကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ အခု ဒီနှစ်မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ ဒိုင်လူကြီးတစ်ဦးအဖြစ် မြင်တွေ့နေရတဲ့ အန်ကယ်ဦးသိန်းတန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးသားငယ်အတွက် ဘယ်လိုအမှတ်တရရှိခဲ့လဲလို့မေးမြန်းတဲ့အခါ….
“အန်ကယ်နဲ့ကတော့ ဟိုးJudges Audition ကတည်းကပေါ့။ သူ့ရဲ့စကားရှိတယ်လေ။ ‘ခေသူမဟုတ်’တို့၊ နောက်ပြီး ကျွန်တော်ယှဉ်ပြိုင်နေတုန်း ကဆို သူတင်စားတာ ‘ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောကြီး’ တို့ စသဖြင့်ပေါ့လေ။ ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မိဘလိုမျိုးကို လေးစား ပါတယ်။ တန်ဖိုးထားပါတယ်” လို့ သားငယ်က ပြောပြပါတယ်။ အခုနှစ် ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုရော သားငယ်ဘယ်လိုမြင်လဲလို့ မေးကြည့်တော့ …..
“ဝမ်းသာပါတယ်။ သူတို့အတွက်လေ။ သူတို့နေရာကနေလည်း ဝင်ပြီးခံစားပေး လို့ရပါ တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်လည်းဒီဘဝကနေတက်လှမ်းလာရတဲ့သူဆို တော့လေ။ အကုန်လုံးကိုလည်း အားပေးပါတယ်။ အမှတ်တရဆိုရင် ပြိုင်ပွဲဝင်နေရတဲ့ နေ့ရက်တိုင်းမှာ ကျွန်တော့်အတွက် အမှတ်တရရှိတယ်။ နေ့တိုင်းအတူတူသွား၊ အတူတူစားပေါ့နော်။ မိသားစု လိုဖြစ်သွားတာကိုး။ အမှတ်တရတွေ တော်တော်များတယ်။ မနက်မျက်လုံးပွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ ဖြစ်ပျက်သမျှအရာတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော်အကုန်လုံး မှတ်မိတယ်ဗျာ။ အများ ကြီးပါပဲ” လို့ သူကဆက်ပြောပြပါတယ်။
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲတုန်းကနဲ့ လက်ရှိအဆိုတော်သားငယ်ရဲ့ ကွာခြားချက်ကဘာဖြစ် မလဲလို့ဆိုရင် ….“
“ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်နေတုန်းကတော့ ချို့တဲ့တာပေါ့ဗျာ။ အဓိကပြောရရင် ငွေရေးကြေးရေးပေါ့။ အခုပြိုင် ပွဲပြီးဆုံးသွားတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆုငွေလေးလည်းရတယ်။ နောက်ပြီး ပွဲလေးတွေလည်း ဆိုခွင့်ရတယ် ဆိုတော့ အနေအစားချောင်တာပေါ့။ ပိုက်ဆံတွေလည်းရတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်နေတုန်းကတော့ ကိုယ်ကဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ကြိုးစားရတာကိုး။ ဆုကတော့ လိုချင်တာပေါ့။ အကုန်လုံးဆုလိုချင်လို့ ဝင်ပြိုင်ကြတဲ့သူတွေချည်းပဲလေ။ ဆုရ ဖို့အတွက်လည်း ကြိုးစားရတယ်။ အခုလိုမျိုး ရပြီးသွားတော့ ပိုခက်ခဲတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရပ်တည်ဖို့က မလွယ်ကူဘူး။ ဆုရဖို့ကမှ လွယ်ရင် လွယ်လိမ့်ဦးမယ်။ ဒီလောကထဲမှာ ရေရှည်၊ ကောင်း ကောင်းမွန်မွန်၊ ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့လေး ရပ်တည်နိုင်ဖို့က ပိုကြိုးစားရတယ်။ အဲဒါတော့ ကွာခြားချက်ပေါ့နော်” လို့ သူကအဖြေစကားဆိုခဲ့ပြီးတကယ်လို့များ မြန်မာအိုင်ဒေါသာ ဝင်မပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် လက်ရှိအချိန်မှာ သားငယ် ဘာလုပ် နေမလဲလို့ဆိုတော့….
“လမ်းဘေးမှာ အကြော် ရောင်းနေရမှာပေါ့ဗျာ (ရယ်လျက်)” လို့ သားငယ်က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ပရိုဂျူဆာရွေးပေးတဲ့သီချင်းတွေကိုဆိုပြီး အခွေထုတ်လိုက်တဲ့ ထက်အိမ်